Sigudluze Abaphathi ... Ungafuna Nawe | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 31, 2016 ULwesine, May 19, 2016 Douglas Karr
Ngizothembeka ukuthi ngiphoxeke ngokumangazayo njengamanje. Nini Ukusingathwa kwe-WordPress ephethwe ngifikile emakethe futhi abanye abangane bami bavula inkampani yabo, bengingeke ngijabule ngokwengeziwe. Njenge-ejensi, bengikhathele ukukhishwa ngemuva kokukhishwa ngabaphathi bewebhu abazodlulisa noma iyiphi inkinga nge-WordPress kithi. Ngokusingathwa kwe-WordPress ephethwe, umphathi wethu wasekela i-WordPress, wayilungiselela ngejubane, futhi waba nezici ezithile zokuphatha wonke amasayithi ethu nawo wonke amaklayenti ethu.
Ngokushesha sabhalisela ukusebenzisana futhi saba nezinkampani ezingamakhulu ezazibhalisa, zisinikeza imali enhle yokubambisana. Ukuphathwa yikhanda njengenhlangano akusekho - ekugcineni saba nokuxhaswa okungama-24/7 kumakhasimende ethu kanye nokusingathwa okuhle ngazo zonke izinsimbi namakhwela. Lokho bekufike kuze kube yinyanga noma edlule. Umbungazi wethu wabanjelwa kusethi yamaseva esikhungweni sedatha esasingaphansi kwesimanga uchungechunge lokuhlaselwa okulimazayo kwe-DDoS. Amasayithi ethu nawo wonke amasayithi ethu amaklayenti abekhuphuka njalo phansi njalo ngeminithi noma kunjalo, kubonakala sengathi akunasiphelo kusayithi.
Besibambelele kodwa bengiqala ukudinwa ngokungabi bikho kokuxhumana. Amaklayenti ethu wonke ayesithinta, futhi asikwazanga ukubatshela noma yini ngoba ukusingathwa kwethu kwakungasitsheli lutho. Ekugcineni ngikhulume nomunye wabanikazi ngaphakathi kweqembu eliqeqeshiwe le-WordPress kuFacebook wathi banazo zonke izandla emphemeni futhi basebenzela ukukhipha amakhasimende athintekile kumaseva abhekisiwe. Whew… bekumnandi ukuzwa futhi sobabili ngimbonge ngomsebenzi wakhe futhi ngabheka phambili ekufudukeni.
Lokho wukuthi, saze sathutha.
Lapho isiza sethu sesithuthiwe, sakhasa saze sayoma. Ngibe nezinkinga zokungena, ukulayisha, noma ukwenza kahle kakhulu ngesayithi. Izivakashi zami zakhononda futhi ukukhasa okuvela kubantu besithathu kukhombisa isiza endaweni eseduze yokuma. I-Google Search Console ikhombise inkinga ecace bha:
Ngilayishe lesi sithombe futhi ngacela ukwesekwa ukuthi babheke iseva yami ngezinkinga, ngibazise ukuthi ngisanda kuthuthwa. Bese kuqala umdlalo wokusola.
Angikwenzi lokhu… bangidlulisile kusuka kubuchwepheshe kuya kubuchwepheshe oqhubeka nokukuphikelela lapho bezama ukuthola izinkinga kusayithi lami. Abazami nokuzama ukuthola ukuthi ngabe yingqalasizinda yabo yini. Ngakho-ke, ngenze noma yini i-geek ezokwenza. Ngiyekile ukushicilela futhi ngalungisa zonke izinkinga njengoba zibakhombisile… nokusebenza kwesayithi akukaze kushintshe. Mhlawumbe baze bafunda nendatshana yami ku izinto ezithinta isivinini sakho sesayithi.
Nakhu abangidlule kukho:
A Iphutha le-PHP nge-plugin ethile lapho yenza i- API ucingo. Ngikhubaze i-plugin, alukho ushintsho kusivinini sesiza.
Isicelo esilandelayo besingibuza ukuthi ngibone kuphi ukuthi isiza sihamba kancane. Ngakho-ke ngabakhomba ku- Idatha yokukhasa ye-Google Webmaster futhi bathi lokho akusizi. Cha duh ... sengiqala ukucasuka kancane.
Bese bethi anginaso isitifiketi se-SSL ku- my Ukunikezwa kwenethiwekhi yokuqukethwe. Lokhu bekungudaba olusha, angikaze ngiqaphele nokuthi i-CDN empeleni ikhubazekile (ukufuduka kwangaphambi nangemuva). Ngakho-ke ngafaka i- Isitifiketi se-SSL futhi bayinika amandla. Alukho ushintsho kusivinini sesayithi.
Basikisela ukuthi ngihlanganise Izicelo ze-JS ne-CSS. Futhi, lokhu bekungulungiselelo olufanayo ngaphambi kokufuduka kepha ngathi kulungile futhi ngafaka i- I-plugin ye-JS ne-CSS optimizer. Alukho ushintsho kusivinini sesayithi.
Bathi kufanele cindezela izithombe. Kepha-ke, azange bazihluphe ngokubona ukuthi sengivele ngikhona ukucindezela izithombe.
Ngibe sengithola umyalezo wokuthi bahlole isiza sami kuwo womabili amaseva futhi kwaba njalo iphutha lami. Ukusho okuqondile, "Ngalolu lwazi, siyakwazi ukubona ukuthi akuyona iseva noma umthwalo wesiphakeli obangela isikhathi esinde sokulayisha sesayithi." Ngakho-ke manje nginamanga nje futhi kuyinkinga yami… ngiyakhumbula lezi zinsuku ngaphambi kokuba ngisebenze nenkampani okwakufanele ibe ngongoti ku-WordPress.
Ngabacela ukuthi bangitshele ukuthi ngizokuzama ini ngokulandelayo. Bancome ukuthi ngi qasha umakhi (Angidlali), lokho kuzosebenza kutimu, i-plugin, nokwenza kahle kwedatha. Ngakho-ke, ochwepheshe beWordPress kulo msingathi abakwazi ukungitshela ukuthi yini okungahambi kahle, kepha bafuna ngiqashe izinsizakusebenza yize ngikhokha ama-2 izikhathi ezi-3 lokho okukhokhiswa yinkampani evamile yokubamba.
Isiza sasiqhubeka ngokuya siba sibi, manje sesikhiqiza Amaphutha we-500 lapho ngizama ukwenza izinto ezilula ngaphakathi kokuphathwa kweWordPress. Ngibika amaphutha angama-500. Into elandelayo engiyaziyo, isiza sami asisekho, sithathelwe indawo yitimu ecacile nawo wonke ama-plugins akhutshaziwe. Manje sengiqala ukusebenzisa WONKE ama-CAPS nezimpawu zokubabaza ezimpendulweni zami. Isiza sami akuyona into yokuzilibazisa, yibhizinisi… ngakho ukuyithatha kwakungeyona inketho.
Ekugcineni, ngithola ucingo oluvela kothile osenkampanini yokubamba futhi sixoxa isikhathi eside ngezinkinga. Nakhu lapho ngiqhuma khona… uyakuvuma lokho amaklayenti amaningana abelokhu enezinkinga zokusebenza selokhu kwabahambisa kude nama-DDoS ahlaselwe amaseva. Ngempela? Bengingeke ngiqagele.
Emuva ekuxazululeni inkinga… Ngitshelwa ukuthi ngingahle ngifune ukuzama ukuthuthela ku i-DNS esheshayo. Okunye ukugwaza ebumnyameni kwazise sengivele ngisingathwe umbani ngokushesha ophethwe umhlinzeki we-DNS.
Iluphu ephelele… sibuyele emuva kusola ama-plugins. Ama-plugins afanayo abesebenza ngaphambi kokufuduka. Okwamanje sengiqedile impela. Ngabeka ezinye izicelo kwabanye Ochwepheshe be-WordPress futhi bangikhomba ligcina uthi lokuphotha luzungeza.
Ngixhuma ne- ligcina uthi lokuphotha luzungeza abangibhalisela i i-akhawunti yokuhlola yamahhala, ungithuthele isiza, futhi sisebenza ngokushesha okukhulu. Futhi, okunye ukudumala, kukwenza ingxenye encane yezindleko zalokho ebengikukhokha nomethuleli wethu wakudala.
Kungani Nganquma Ukuthuthela Kwelinye Izwe?
Ukuhambisa wonke amasayithi ethu ngeke kube mnandi. Angisithathanga lesi sinqumo ngenxa yezinkinga zokusebenza, ngasenza ngenxa yezinkinga zokwethembana. Inkampani yami yokugcina eyangibamba yangilahlekisela ngoba babentula ubuqotho (futhi basenabo ubuqotho) ukuvuma ukuthi banezinkinga ezithile ezinkulu zokusebenza. Ngangibabekezelela bangitshela iqiniso futhi ngibanikeze nokulindela ukuthi bazolungiswa nini, kodwa angikwazanga ukubekezelela ukukhomba nje iminwe.
Nawu umbiko we-Webmaster ezinsukwini ezimbalwa kamuva:
Ungase uzibuze ukuthi yini engenzeka lapho ligcina uthi lokuphotha luzungeza iba nkulu… ingabe kuzoholela ekuhlangenwe nakho okufanayo? Enye yezinto engizitholile kulokhu kufuduka ukuthi umphathi wethu wakudala wayengenawo amandla wokubamba ukusebenza kwe-akhawunti eyodwa kunenye. Ngenxa yalokho, inkinga ingahle ingabi ukufakwa kwami ​​nhlobo, kungaba omunye umuntu ohlanganisa izinsiza kuseva ezisiletha phansi sonke.
Isayithi livulekile ngokuphephile ligcina uthi lokuphotha luzungeza, sifaka izitifiketi zethu zokuphepha futhi sibuyisa isilo. Ngiyaxolisa ngokungabikho kokuqukethwe kuleli sonto eledlule. Ungabheja ukuthi sizokwenzela isikhathi esilahlekile!
Ukudalulwa: Manje sesiyinxusa leFlywheel! Futhi ligcina uthi lokuphotha luzungeza bekulokhu kunconywe yiWordPress!
Tags: flywheelukusingathwa kwe-wordpress ephethweWordPressi-wordpress hostingwpengine
I-Blitz: Ukuhlolwa Kokusebenza Nokulayishwa Okuvela Emafini
Feb 1, 2016 ngo-7: 09 PM
Nginomuzwa wokuthi benginezinkinga ezifanayo nakwabanye abaphethe isiza sami. Uzibuza ukuthi ngabe bayasusa yini ukusingathwa kwabo kwe-WordPress ephethwe kumaseva afanayo ababethola ukuhlaselwa kwe-DDoS? Umdlalo ofanayo wokusolwa nokusolwa kuze kube yilapho ekugcineni bethola ubuchwepheshe obuthi sebekhombe izingqinamba ezithile zangaphakathi zeseva abasebenza kuzo. Ungakholelwa ukuthi ngibe nenkinga kusukela lapho ngenhlanhla.
Feb 1, 2016 ngo-8: 03 PM
Ngicabanga ukuthi isidingo siphezulu kulezi zinkundla ezilawulwayo. Ngeshwa, njengoba mina nawe sazi… kunabantu abaningi ngaphandle lapho “abacabanga ukuthi bayazi” uma kuqhathaniswa nokwazi okwenzekayo ngalezi zinkundla. Ngiyakholelwa ukuthi bazobamba futhi basebenzise izinhlelo zokuqapha ezizokwazi ukulandelela izingqinamba. Ngokwethembeka, lesi sehlakalo sivele sengathi baphonsa imicibisholo odongeni. Ngaphelelwa ukuzethemba konke.
Feb 1, 2016 ngo-8: 35 PM
Ngiyabuzwa ubuhlungu bakho. Akukho lutho olubi ukwedlula ukuhamba kumhlahlandlela wokuxazulula inkinga ongenamsebenzi ongenamsebenzi kanti usuyazi ukuthi ngeke kukusize.
Ingabe lo omunye umphathi lapho i-IonThree isingathwa khona? Futhi kufanele sikucabangele ukuthutha? Ngicabanga ukuthi sivuselele nje.
Futhi, bengilindele ukuthi ubize inkampani ngegama ngoba unamakhasimende aphethwe kuwo futhi, njengami, kungenzeka ukuthi bazibuza ukuthi ngabe banezinkinga abangazazi okwamanje. Lokho ngaphandle kokuthi uhlela umlayezo wangasese kumakhasimende athintekayo ngakho.
Feb 1, 2016 ngo-9: 10 PM
Ngithole inkinga ngisebenzisa i-Google Webmasters futhi ngibheka izibalo zethu zokukhasa, iTolga. Angikholwa ukuthi wonke amaklayenti abo, ngicabanga nje ukuthi sixhunywe kwamanye amaseva ahamba kancane anomthwalo omningi kuwo. Uma ungaboni ukwehla kokusebenza, mhlawumbe asikho isizathu sokushiya. I-Flywheel ibiza kancane ngezinketho zethu zama-akhawunti amaningi, awunasiqiniseko kepha ungonga imali eningi.
Feb 2, 2016 ngo-10: 16 AM
Umlandeli omkhulu kaFlywheel, uDoug. Usebenzise isikhathi esingaphezu konyaka.
Feb 2, 2016 ngo-5: 10 PM
Angikholwa ukuthi isiza sihambe kancane kangakanani, nokuthi abakwazanga ukukunikeza impendulo eqondile. Ngijabule ukuzwa ukuthi izinto zisebenza kahle noFlywheel. Sisanda kushintshela ukusingathwa kwesiza seRoundpeg futhi, futhi sinemvelo ezinze kakhudlwana yesiza sethu.
Mar 23, 2017 ku-1: 30 AM
Ngilwa kanzima nezinkampani eziphonsa ngaphansi kwebhasi kulezi zikhala esidlangalaleni. Yonke inkampani inabantu abalungile futhi ithemba lami ukuthi ngivele ngibabambe ngenyanga embi.
Mar 24, 2017 ku-2: 52 PM
Bengilokhu ngicabanga kakhulu ngalokhu, futhi uyazi ini? Uqinisile. Sicela ususe ukuphawula kwami. Ngaphandle kwezinkinga esinazo ku-w / Flywheel, noma ngosuku lwabo olubi kakhulu, basashaya ababungazi abanjengo-HostGator, GoDaddy, njll.